science knowledge Archives - Page3of7- Thutazone
နာနိုတက္ကနော်လော်ဂျီဆိုတာကတော့ တက္ကနော်လော်ဂျီဆိုတာကတော့ နည်းပညာပေါ့၊ နာနိုဆိုတာကတော့ အရွယ်အစားပေါ့။ စကေးပေါ့ခင်ဗျာ.. ဥပမာ. မိုက်ခရိုဆိုတာကတော့ လူအများစုသိတာကတော့ မိုက်ခရို ဆိုတာ အမှုန်လေးတွေ အရမ်းငယ်တယ်၊ မိုက်ခရိုလို့ သိပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆိုတာက အဆ တစ်သန်းငယ်တာပေါ့။ နာနိုဆိုတာကတော့ အဆ ...
ကမ္ဘာဂြိုဟ်တည်ရှိရာနေအဖွဲ့အစည်း ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ဆန်းပြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဂြိုဟ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များစွာက အတည်ပြုပြော ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဂြိုဟ်တွေအနက်မှာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်လိုပဲ အပြာရောင်အဆင်းရှိပြီး ဖန်မိုးတွေရွာချလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂြိုဟ်တစ်လုံးဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာနဲ့အလွန်ဆင်တူတာကြောင့် စတင်တွေရှိချိန်တုန်း ကဆို ...
အမှတ်မှားနိုင်တဲ့ “ခဲ” နဲ့ “ပြဒါး” တို့အကြောင်း
ခဲ(Lead) လူသားတွေ နေ့စဉ် ကျင်လည်နေတဲ့ ဘဝထဲက သိပ္ပံဆိုင်ရာ နားလည်မှု လွဲမှားပြီး အမှတ်မှားနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ အမှတ်အမှားဆုံးက Lead လို့ ခေါ်တဲ့ ခဲပါ။ တချို့က ခဲတံဆိုတာ ခဲသတ္တုနဲ့ လုပ်ထားတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ...
ကြယ်တံခွန် တို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကြယ်တံခွန်ဆိုရာ၌ တစ်ခါတစ်ရံသာလျှင် မြင်ရသော မီးရှုးသဏ္ဌာန် အရောင်တန်းထွက်နေသည့်ကြယ်ကို ဆိုလိုသည်။ ကောင်းကင်တန်ဆာတို့တွင် ကြယ်တံခွန်များသည် အံ့ဩစရာ ကောင်းပေသည်။ ကြယ်တံခွန်တို့သည် ရုတ်တရက် ပေါ်လာတတ်၍၊ ရက်အနည်းငယ်သော်၎င်း ရက်ပေါင်းများစွာသော်၎င်း ကြာအောင် မြင်မြင်ထင်ထင် ရှိပြီးနောက်၊ နေမှဝေးရာသို့ ဆုတ်ခွာပျောက်ကွယ် ...
Via : Curiosity Science Magazine of Myanmar ဥတ္တရအလင်းတန်း(Northern Light) ဆိုသည်မှာ ညဉ့်ကောင်းကင်ယံတွင် လှပစွာ ဖြာထွက်သော ရောင်စုံ အလင်းတန်းများကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းအလင်းတန်းများကို Aurora အလင်းတန်းများဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသေးသည်။ ...
၁။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဆိုသည်မှာ မြင်နိုင်သော ခရမ်းရောင်ခြည်ထက် လှိုင်းတိုသော မမြင်နိုင်သည့် ရောင်ခြည်မျိုးဖြစ်သည်။ မိကျောင်းများနှင့် ငှက်ငယ်များကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန် အများစုကမူ မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟု ခေါ်ရခြင်းမှာ လူတို့မြင်နိုင်သော ခရမ်းရောင်ထက် ကြိမ်နှုန်းနှင့် လှိုင်းအလျားတို့အနေဖြင့် ...